Nea Egyptfo yɛ de boa no, mfaso biara nni so (1-7)
Nkurɔfo po nkɔmhyɛ asɛm no (8-14)
Mode mo ho to me so a, mubenya ahoɔden (15-17)
Yehowa dom ne nkurɔfo (18-26)
Yehowa ne Ɔkyerɛkyerɛfo Kunini no (20)
“Ɔkwan no ni” (21)
Yehowa bebu Asiria atɛn (27-33)
30 Yehowa asɛm ni: “Munnue, mma atuatewfo,+Wɔn a nhyehyɛe* a wodi akyi no mfi me,+Wɔn a wɔyɛ apam,* nanso me honhom mpene so,Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔde bɔne bɛka bɔne ho. 2 Wosian kɔ Egypt+ bere a wommisaa me,*+Sɛ wɔrekɔpɛ ahobammɔ wɔ Farao nkyɛn*Na wɔakohintaw Egypt nwini ase! 3 Nanso Farao ahobammɔ bɛma mo ani awu,Na Egypt nwini ase a mobɛkɔ akohintaw no bɛdan mo animguase.+ 4 Na ne mpanyimfo wɔ Soan,+Na n’ananmusifo* adu Hane. 5 Obiara ani bewu,Efisɛ ɔman no ho remma wɔn mfaso.Wɔrentumi mmoa wɔn na wɔrennya wɔn so mfaso biara;Aniwu ne animguase nko ara na wɔde begyaw wɔn.”+ 6 Atemmusɛm a etia anaafo fam mmoa ni: Wɔfa ahoyeraw ne ahokyere asaase so,Baabi a gyata wɔ, gyata a ɔrebobom,Baabi a ahurutoa* ne ɔwɔ a ɔtow ne ho a n’ano yɛ ogya* wɔ no.Wɔde wɔn ahode gu afurum akyi,Na wɔde wɔn nneɛma gu yoma akyi apɔwapɔw so. Nanso saa nneɛma yi remma nnipa no nnya mfaso biara. 7 Efisɛ nea Egyptfo yɛ de boa no, mfaso biara nni so.+ Enti mafrɛ no: “Rahab,+ nea ɔte hɔ dinn.” 8 “Afei kɔ na kɔkyerɛw gu ɔpon so wɔ wɔn anim,Na kyerɛw wɔ nhoma mu sɛnea ɛrempopa,+Na atena hɔ akosi daakye,Na ayɛ adanse afebɔɔ.+ 9 Efisɛ wɔyɛ ɔman atuatewfo,+ mma a wonni nokware,+Mma a wɔmpɛ sɛ wotie Yehowa mmara.*+ 10 Wɔka kyerɛ adehufo sɛ, ‘Munnhu ade,’ Na wɔka kyerɛ adiyifo sɛ, ‘Monnka anisoadehu a ɛyɛ nokware nnkyerɛ yɛn.+ Monka adɔkɔdɔkɔsɛm nkyerɛ yɛn; munnya anisoadehu a ɛyɛ nnaadaa.+ 11 Mumfi ɔkwan no so; momman mfi kwan no so. Munyi Israel Kronkronni no mfi yɛn ani so.’”+ 12 Enti nea Israel Kronkronni no aka ni: “Esiane sɛ moapo asɛm yi,+Na mode mo ho ato asisisɛm ne nkontomposɛm soNa mode mo ani ato eyinom so+ nti, 13 Mo bɔne nti, mote sɛ ɔfasu a apae,Te sɛ ɔfasu tenten a akyea. Ebebu agu mpofirim, prɛko pɛ. 14 Wobebubu no te sɛ ɔnwemfo ahina kɛse;Ebebubu pasaa ama nea abubu no mu sin bi mpo renkaNa wɔde ayi ogya afi muka mu,Anaa wɔde asaw nsu afi nsu a ɛtaa hɔ* mu.” 15 Nea Awurade Tumfo Yehowa, Israel Kronkronni no aka ni: “Sɛ mosan ba me nkyɛn na moyɛ komm a, mubenya nkwa.Na sɛ mode mo ho to me so na mo koma antu a, mubenya ahoɔden.”+ Nanso moampene.+ 16 Mmom mokae sɛ: “Daabi, yɛbɛtena apɔnkɔ so aguan!” Ɛno nti mubeguan nso. “Apɔnkɔ a wɔn ho yɛ hareso na yɛbɛtena!”+ Enti wɔn a wotiw mo noho bɛyɛ hare.+ 17 Onipa baako behunahuna nnipa apem ama wɔn ho apopo;+Na baanum behunahuna mo ama moaguanKosi sɛ mo a mobɛka no bɛyɛ sɛ frankaa bi a esi bepɔw so,Te sɛ ahyɛnsode bi a esi koko so.+ 18 Nanso Yehowa de abotare retwɛn sɛ ɔbɛdom mo,+Na ɔbɛma ne ho so ahu mo mmɔbɔ.+ Efisɛ Yehowa yɛ atɛntrenee Nyankopɔn.+ Anigye ne wɔn a wɔtwɛn no nyinaa.*+ 19 Sɛ ɔman no bɛtena Sion, kyerɛ sɛ, Yerusalem+ a, worensu bio.+ Wunya ma wo nne so su frɛ no a, sɛnea ɛte biara ɔbɛdom wo; ɔte ara pɛ, obegye wo so.+ 20 Ɛwom, Yehowa de ahoyeraw bɛyɛ aduan ama wo na ɔde nhyɛso ayɛ nsu ama wo.+ Nanso wo Kyerɛkyerɛfo Kunini no renhintaw bio, na wode w’ani behu wo Kyerɛkyerɛfo Kunini+ no. 21 Sɛ woman fa nifa oo, woman fa benkum oo,+ w’aso bɛte asɛm bi wɔ w’akyi sɛ: “Ɔkwan no ni.+ Fa so.” 22 Na dwetɛ a wode akata w’ahoni ho ne sika kɔkɔɔ a wode adura wo dade ahoni* ho no, wubegu ho fĩ.+ Wobɛtow agu te sɛ ntama a ɔbea yɛ bra a ɔde siesie ne ho,* na wobɛka akyerɛ no sɛ, “Fi ha kɔ!”*+ 23 Na ɔbɛma osu atɔ agu w’aba a woadua wɔ asaase mu no so,+ na aduan a w’asaase bɛbɔ no bɛdɔɔso na ɛbɛmee wo.*+ Saa da no, wo mmoa benya asaase tɛtrɛɛ adidi so.+ 24 Na anantwi ne mfurum a wɔdɔw asaase no bedi nnuan pa a wɔakeka afra a wɔde sofi ne nkorata ahuw so. 25 Na nsubɔnten ne nsuka bɛba bepɔw tenten ne koko a ɛkorɔn biara so,+ ɛda a wobekunkum nnipa asam hɔ a abantenten bedwiriw agu no. 26 Na ɔsram hann bɛyɛ te sɛ owia hann; na owia hann bɛyɛ mmɔho ason+ te sɛ nnanson hann, ɛda a Yehowa bɛkyekyere ne man a abubu,+ na wasa kuru kɛse a onyae bere a ɔbɔɔ no no.+ 27 Hwɛ! Yehowa din fi akyirikyiri reba;Ɛde n’abufuhyew ne omununkum a emu yɛ duru reba. Abufuw ayɛ n’anom ma,Na ne tɛkrɛma te sɛ ogya a ɛhyew ade.+ 28 Ne honhom* te sɛ asubɔnten a eyiri du kɔn mu pɛɛ,Na ɔbɛwosow amanaman no wɔ ɔsɛe sɔnee* mu,Na ɔde nnareka bɛhyɛ nkurɔfo no afonom+ ama wɔafom kwan. 29 Na mo dwom bɛyɛ sɛ dwom a wɔto no anadwoBere a moresiesie* mo ho adi afahyɛ no.+Na mo ani begye mo koma muTe sɛ obi a ɔde atɛntɛbɛnRekɔ Yehowa bepɔw so, Israel Botan no+ nkyɛn. 30 Yehowa bɛma nnipa ate n’anuonyam nne+ no,Na wama wɔahu n’abasa+ a ɛresian wɔ n’abufuhyew mu,+Wɔ ogya a ɛhyew ade+Ne osubran+ ne ahum ne asukɔtweaa+ mu no. 31 Na Yehowa nne no nti, Asiria koma betu;+Ɔde abaa bɛhwe no.+ 32 Na bere biara aYehowa de asotwe abaa betwa Asiria no,Wɔbɛbɔ mpintin ne asanku,+Bere a ɔrehim ne nsa atia wɔn ɔko mu no.+ 33 Wɔasiesie ne Tofet*+ ato hɔ dedaw;Wɔasiesie ama ɔhene no nso.+ Wama baabi a ɔde anyina gu no mu ayɛ tenten, na atrɛw,Ogya ne anyina bebree wɔ hɔ. Yehowa ahome a ɛte sɛ sɔfe* asubɔnten noDe ogya bɛto mu.
^ Anaa “tirimbɔ.”
^ Nt., “Wɔn a wogu nsã.” Ɛbɛyɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ nnipa bi apene so sɛ wɔbɛyɛ biribi.
^ Anaa “wommisaa m’anom asɛm.”
^ Nt., “Farao abannennen ase.”
^ Anaa “n’abɔfo.”
^ Anaa “ɔwɔ a ɔtow ne ho a n’ano bɔre te sɛ ogya.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “abura.”
^ Anaa “wɔtwɛn no denneennen.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “na wobɛfrɛ no efĩ.”
^ Nt., “ɛbɛyɛ sɔkyee, nea ahoɔden wom.”
^ Anaa “N’ahome.”
^ Nt., “adehunu sɔnee.”
^ Anaa “moretew.”
^ Wɔde “Tofet” di dwuma wɔ ha sɛ kasakoa de gyina hɔ ma baabi a wɔhyew ade; ɛkyerɛ ɔsɛe.